စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကမနေ့ကပဲ။ သင်၏ရှုပ်ထွေးသောစီမံကိန်းနှင့်အုပ်စုလိုက်လုပ်ဆောင်မှုကိုပြင်ဆင်ကြပါစို့။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သုတေသန၊ လမ်းညွှန်များ၊ ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများ၊ တင်ပြချက်များနှင့်ပြည့်စုံသောအထုပ်တစ်ခုကိုပေးသည်။
အဆိုပါစီမံကိန်းကိုအလုပ် - သင်ကိုယ်တိုင်ရေးပါ	သို့မဟုတ်	ရေးကြစို့
သင်တန်းကာလအတွင်းစီမံကိန်းလုပ်ဆောင်မှုကိုနည်းအမျိုးမျိုးဖြင့်ပြုလုပ်ရမည်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအတွက်တိကျသောဘာသာရပ်များမရှိပါ။ ဤအိမ်မှုကိစ္စပုံစံသည်ကျောင်းသားများအားအထူးတောင်းဆိုသည်။ တစ်ဖက်တွင်အသင်းတစ်ခုတွင်အလုပ်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူစီမံကိန်းအလုပ်တစ်ခုကကျောင်းသားများသည်သိပ္ပံနည်းကျသီအိုရီအခြေခံမူများကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးရန်သင်ယူခဲ့ကြပြီဖြစ်သည်။ လွတ်လပ်သောအလုပ်လိုအပ်သည်နှင့်သိပ္ပံအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အတွက်ပါးဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကိုအဆင့်အမျိုးမျိုးတွင်ပြုလုပ်သည်။ သက်သက်သာစာသားအိမ်စာနှင့်မတူဘဲအသင်းတွင်ယူဆချက်အမျိုးမျိုးနှင့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောဖြေရှင်းနည်းများကိုဆွေးနွေးထားသည်။ ထို့ကြောင့်ဆွေးနွေးမှုတွင်ရှုထောင့်သစ်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးအဖွဲ့ကိုအမှီအခိုကင်းသောအလုပ်တွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။ ဤအချက်သည်စီမံကိန်းကိုပါ ၀ င်ပတ်သက်သူအားလုံးအတွက်ပိုမိုစိတ်ဝင်စားစေပါသည်။ သို့သော်အဖွဲ့ ၀ င်များထံမှအဖွဲ့လိုက်လုပ်ဆောင်မှုများစွာလိုအပ်သည်။ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသည်အဖွဲ့တစ်ခု၏ခုခံမှုအားလုံးကိုဆန့်ကျင်။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်အကြံဥာဏ်များကိုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းမဟုတ်ပါ။
သို့သော်အသင်းတစ်ခုတွင်အလုပ်လုပ်နိုင်ခြင်းသည်အခြားအဖွဲ့ ၀ င်များအားမိမိကိုယ်ကိုလက်အောက်ခံခြင်းဟုမဆိုလိုပါ။ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သည်ပconflictိပက္ခနှင့်ဝေဖန်မှုများမှအသက်ရှင်သည်။ ထို့ကြောင့်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အတွင်းရှိဆက်သွယ်ရေးသည်အလွန်အရေးကြီးသောလက္ခဏာဖြစ်သည်။ ဆက်သွယ်ရေးဆိုသည်မှာသတင်းအချက်အလက်နှင့်အချက်ပြဖလှယ်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ သို့သော်ဆက်သွယ်ရေးသည်ပြောသောစကားထက်များစွာပိုပါသည်။ ဘာသာစကားမှတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်စွမ်းနှင့်စွမ်းရည်သည်လူသားအားကမ္ဘာဂြိုဟ်ရှိသတ္တဝါအားလုံးနှင့်ခွဲခြားသိမြင်စေသည်။ တိရိစ္ဆာန်များသည်လည်းဆက်သွယ်ပြောဆိုခွင့်ရှိသည်။ သို့သော်၎င်းသည်အများအားဖြင့်နှုတ်ဖြင့်မဟုတ်သောinရိယာတွင်ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။ ဆက်သွယ်ရေးသည်ဘာသာစကားမျှသာမဟုတ်ပါ။ နှုတ်ဖြင့်မဟုတ်သောဖြစ်နိုင်ချေများကျယ်ပြန့်သောနယ်ပယ်များတွင်အမူအယာများ၊ အသံလေသံနှင့်စကားပြောနေစဉ်ကြည့်ရှုခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ အမှန်မှာနှုတ်ဖြင့်ဆက်သွယ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အမှန်တကယ်သိမြင်သောအရာ၏ ၁၀% သာဖြစ်သည်။ သတင်းအချက်အလက်အများစုကိုနှုတ်ဖြင့်မဟုတ်ဘဲဆက်သွယ်သည်။ ဆက်သွယ်ရေးသိပ္ပံသည်ကျွန်ုပ်တို့၏မှတ်ဉာဏ်တွင်သတင်းအချက်အလက်များကိုသိမ်းဆည်းထားသည့်အဆင့်ကိုအာရုံစိုက်စေသည်။ ဖတ်ရှုသည့်အရာ၏ ၁၀% ကိုသာမှတ်ဉာဏ်တွင်လုပ်ဆောင်သည်။ အများဆုံးစကားဝိုင်း၏ ၂၀% ကိုသိမ်းဆည်းထားသည်။ ကျန်ရှိသည့် ၇၀% သောအချက်အလက်အများစုသည်နှုတ်ဖြင့်မဟုတ်သောအချက်ပြမှုများမှတဆင့်ဆက်သွယ်သည်။
Lencioni ၏အဆိုအရအဖွဲ့တစ်ခု၏အလုပ်မဖြစ်သောငါးခု (၂၀၀၂) အရအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့တွင်အလုပ်လုပ်ခြင်းအတွက်အကျိုးရှိမည်မဟုတ်သောမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအချက် ၅ ချက်ရှိသည်။
အပြန်အလှန်အားဖြင့်၊ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့၏အဖွဲ့ဝင်များသည်အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်းအောင်မြင်နိုင်သည့်ရလဒ်များကိုအလွန်စိတ် ၀ င်စားသည်။ အသင်းနှင့်အသင်းအတွက်တာ ၀ န်သည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စများကိုနောက်ခံထားပါသည်။ ရရှိလာတဲ့စည်းလုံးညီညွတ်မှုအမြဲအပြုသဘောတုံ့ပြန်ချက်စေပါတယ်။ အဖွဲ့၏ကုန်ထုတ်စွမ်းအားသည်ပထမဆုံးဖြစ်သည်။ သိပ္ပံနည်းကျဖြေရှင်းချက်များ၏ပူးတွဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည်မတူညီသောထင်မြင်ချက်များကိုသည်းခံခြင်းမှရရှိသည်
အခြားမည်သည့်သိပ္ပံနည်းကျအလုပ်မျိုးမဆိုကဲ့သို့ပင်စီမံကိန်းလုပ်ဆောင်မှုတွင်စာပေသုတေသနများစွာနှင့် (တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း) ရလဒ်များကိုချရေးခြင်းပါဝင်သည်။ သင်၏လေ့လာမှုပြုလုပ်နေစဉ်အတွင်းသင်သည်လက်ရှိစီမံကိန်းလုပ်ငန်းကိုကိုင်တွယ်ရန်သာလိုအပ်သည်။ စာမေးပွဲများနှင့်အခြားအိမ်စာအတွက်တစ်ပြိုင်တည်းပြင်ဆင်ရမည်။ သတ်မှတ်ထားသည့်အချိန်၌တိကျသောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွင်ရေးသားရန်လက်တွေ့ဖြစ်နိုင်ခြေကိုသင်တွေ့မြင်ရန်ခဲယဉ်းနေပြီဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ghostwriting Agency ၏အကူအညီကိုရယူသင့်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စာရေးဆရာများသည်သက်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်ဒီဂရီများရှိသည့်ပညာရပ်နယ်ပယ်အားလုံးမှလာသည်။ ထို့ကြောင့်၊ သင်၏အလုပ်နှင့်သင့်တော်သောစာရေးသူအားကြီးကြပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ကြီးမားသောပြproblemနာမဟုတ်ပါ။
သင်၏ပရောဂျက်ကိုကျွန်ုပ်တို့၏စာရေးသူတစ် ဦး ထံလွှဲပြောင်းပေးခြင်းသည်ဥပဒေရေးရာလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ မင်းရဲ့ပရောဂျက်မှာ ghostwriter ပါဝင်တယ်။ သင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏စာရေးသူအကြားသက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုသည်အဖွဲ့၏ဆွေးနွေးမှုတွင်သင်ဆွေးနွေးနိုင်သောထိုးထွင်းသိမြင်မှုအသစ်များကိုပေးလိမ့်မည်။
စီမံကိန်းတွင်သင်၏အပိုင်း၏ရေးသားထားသောမှတ်တမ်းသည်နောက်ဆက်တွဲအကဲဖြတ်ခြင်း၏အခြေခံဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဤနေရာတွင်ကောင်းမွန်သောနောက်ဆုံးတန်းကိုရရှိရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ သိပ္ပံနည်းကျအလုပ်အတွက်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီမှုကိုကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်မှအာမခံသည်။ သင်၏စီမံကိန်းအစိတ်အပိုင်း၏နောက်ဆုံးရေးသားထားသောရလဒ်ကိုသင့်ထံမပေးပို့မီကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီသည်အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုအဆင့်အမျိုးမျိုးကိုဖြတ်သန်းသွားသည်။ ၎င်းတွင်အဆင့်သုံးဆင့်ဖြင့်ပြုလုပ်သော plagiarism စစ်ဆေးခြင်းပါဝင်သည်။ ပထမအဆင့်မှာ plagiarism software ဖြင့်စစ်ဆေးခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းကိုလက်ရှိတက္ကသိုလ်များနှင့်ကောလိပ်များတွင်အသုံးပြုသည်။ ကျနော်တို့တော်တော်များများလွတ်လပ်သော software ကိုစနစ်များကိုအသုံးပြုပါ။ plagiarism ၏အစီရင်ခံစာရှိပါက, ghostwriter စာသား၏သက်ဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများကိုပြောင်းလဲရန်တောင်းဆိုမှုနှင့်အတူအကြောင်းကြားပါလိမ့်မည်။
စကားလုံးထပ်ခါတလဲလဲရှောင်ရှားရန် synonyms ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်း
Professional editing သည်သင်၏သိပ္ပံနည်းကျစာသားကိုပထမတန်းစားအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲလိမ့်မည်။
သင်၏တင်သွင်းရမည့်နောက်ဆုံးရက်သည်အလွန်နီးကပ်နေပြီ၊ လာမည့်တက္ကသိုလ်စာမေးပွဲများအကြောင်းကိုလေ့လာရန်နှင့်သိရန်ကျန်နေဆဲဖြစ်သည် အချိန်ပြproblemsနာများ ဆက်လုပ်လို့မရဘူးလား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၏တည်ဆောက်ပုံသည်လည်းအသီးအနည်းငယ်သာသီးပွင့်ပြီးစိတ်ပျက်စရာကောင်းသောအတွေ့အကြုံလည်းရရှိသည်။
ပြproblemနာမရှိပါဘူး၊ ကျွန်တော်တို့ကူညီဖို့ဒီမှာရှိနေပါတယ်။ ငါတို့နှင့်အတူသင်ရ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကူအညီ အတွေ့အကြုံနှင့်ထံမှ အရည်အချင်း ghostwriterအကြောင်းအရာမခွဲခြားဘဲ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ Ghostwriters များသည်သက်ဆိုင်ရာအထူးကုနယ်မြေရှိစာပေများ၏ပြည့်စုံပြီးခေတ်မီသောခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ရှိသည်၊ သက်ဆိုင်ရာဝေါဟာရများနှင့်အကျွမ်းတ ၀ င်ရှိပြီးသင့်ဘာသာတိုးတက်စေရန်အတွက်ဘာသာရပ်နှင့်သက်ဆိုင်သောနည်းလမ်းများကိုမှန်ကန်စွာမည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုသိသည်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အောင်မြင်စွာဖြည့်စွက်ရန်။ ငါတို့အဖွဲ့နှင့်အတူ, သင်လာမည့်စာမေးပွဲများအတွက်လေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ်နှင့်သင်၏သိပ္ပံနည်းကျအလုပ်အကြောင်းကိုစိုးရိမ်ပူပန်စရာမလိုပါ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း မည်သည့်အုပ်စုစိတ်ဖိစီးမှုမပါဘဲပြုပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏အယ်ဒီတာများသည်သူတို့၏နယ်ပယ်များတွင်ပညာရှင်များဖြစ်ကြပြီးသင်၏တစ် ဦး ချင်းဆန္ဒအလိုက်သင်၏သိပ္ပံဆိုင်ရာအလုပ်များကိုဖန်တီးကြသည်။
ယခုအခမဲ့တောင်းဆိုမှုကိုတင်ပါ၊ သင်ရွေးချယ်သောနေ့၌သင်၏သိပ္ပံနည်းကျအလုပ်ကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်။ သင်၏အလုပ်ကိုအချိန်မီဆောင်ရွက်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အားအာမခံချက်ပေးသော plagiarism နှင့်အမှားများမှကျယ်ပြန့်သောအရည်အသွေးစစ်ဆေးမှုများမှတဆင့်သင်၏အလုပ်သည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောတစ်ကြိမ်မိတ္တူတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြနိုင်သည်။ plagiarism မရှိပါအကျိုးဆက်များ - ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ghostwriting ။
papernerds ၏မြန်ဆန်။ အရည်အချင်းရှိသောအကူအညီကြောင့်ကျွန်ုပ်ကောင်းစွာပြင်ဆင်နိုင်ခဲ့သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
Jule အိပ်ချ်သင်ကြားရေး post ကို
ကျွန်တော့် Papernerds.de ကထိကများ၏ကူညီပံ့ပိုးမှုကကျွန်ုပ်၏အိမ်မှုကိစ္စများကိုအပြီးသတ်ထိတွေ့စေခဲ့သည်။ အဆက်အသွယ်အမြဲဖော်ရွေများနှင့်အရည်အချင်းရှိခဲ့သည်။
ကြီးစွာသောအကူအညီအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သူတို့ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာသိတဲ့လူတွေနဲ့အလုပ်လုပ်ရတာတကယ်ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်။ ပဲအကြံပြုနိုင်ပါတယ်!
မင်းမရှိရင်ငါငါ့နောက်ဆုံးရက်ကိုငါလုပ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူး။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် 🙂
ငါအချိန်မီလုပ်နိုင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အကူအညီရပြီ။ ကျွန်ုပ်၏အကြံပေးသည်ကျွန်ုပ်အားအလွန်တုံ့ပြန်မှုရှိပြီးပြင်ဆင်ခြင်းအဆင့်တွင်လည်းအလွန်အထောက်အကူပြုခဲ့သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊